Ogaden News Agency (ONA) – Isu-duwaha Jaliyadaha Khlaiijka oo ka qaybgalay shirkii jaaliyadda Jidda
Isu-duwaha Jaliyadaha Khlaiijka oo ka qaybgalay shirkii jaaliyadda Jidda
Waxaa shir si habsami ah loo soo abaabulay lagu qabtay 20kii bishan magaalada xeebta ah ee Jiddah, caasimadda 2aad ee dalka Sacuudi Caraabiya.
Waxaa shirka qabtay jaliyadda Sacuudiga faraca Jiddah, halkaasoo ay ka soo qaaybgaleen jaaliyado ka kala socoday magaalooyinka Maka al Mukaram iyo Khamiis-C/rxmaan Deyl oo dadweynihii ka soo qaybgalay shirka ku soo dhaweeyay. Ka dib waxaa lagu furay sidii caadada ahayd aayada quraana iyo wacdi diini ah oo dadweynaha ku baraarujiyay Alla ka cabsi iyo ilaalinta midnimada iyo isku duubnida oo ka mid ah tiirarka islaamka.
Kadib waxaa lagu soo dhaweeyay madane C/lahi Axmed [ciraaq] oo ah Isu-duwaha Jaaliyadaha Bariga dhexe. Mudane Ciraaqi wuxuu uga waramay jaaliyadaha meesha uu maraayo halganka Ogaadeeniya gudo iyo dibadba iyo dhacdooyinkii ugu danbeeyay ee gumeeysaga lagu naafeeyay. Wuxuu mudanaha ka xogwaramay heerarkii kala duwanaa ee CWXO uu soo maray ee awooda ciidan ee jabhadda ay maanta leedahay, arintaasoo uu ku tilmaamay inay tahay arin Ilaahay looga mahadnaqo, isla markaana shacabkeena lagu amaano.
Xubna kala duwan ayaa shirka ka hadlay oo ka soo jeediyay afkaaro iyo talooyin qiimi leh iyo siyaabihii lagu horumarin lahaa hawlaha jaaliyadaha Sacuudiga sanadkan 2012ka u qorsaysan. Ugu dambayntii waxaa lagu soo gabagabeeyay is-afgarad iyo qorshe midaysan oo lagu hawlgalo sanadka soo socda.